SHIR CAKIRAN IYO ERGO CEEBAYSAN
Tan iyo intii ka dambaysay burburkii dawladdii Soomaaliyeed waxaa dhagaheena ka batay wax loogu yeero shirar dib u heshiisiineed oo lagu furdaaminayo dhibaatada ku habsatay dalka dibna loogu soo celinayo qaranimadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed iyo kaalin ay kaga jirtay beesha caalamka.
Hadaba shirarkaasi oo lagu qabtay meelo kala geddisan siiba wadamada deriska 14 kii sanno ee ugu dambeeyay ayaa dhammaantood ay ahaayeen kuwo lagu guuldaraysay oo aan wax macno lihi ka soo bixin haddii ay ka soo baxeena aanan la fulin.
Burburka ama guul darrada shirarkaas ayaa waxaa inta badan sabab looga dhigaa isu tanaasul la’aanta dagaal oogayaasha iyo iyagoo danahooda gaarka ka hor mariya midda qaranka oo wax kasta oo halkaas ka soo baxa ilaa ay iyagu wax ka noqdaan aanay ogolaanayn.Waxaa iyana intaa sii dheer dawladaha shisheeye siiba kuwa deriska la ah Soomaaliya oo raba inay saamayn ku yeeshaan natiijada shirka.
Shirarkan tirada badan ee Soomaalida loo qabto ayaaba la sheegaa inay haatan ka mid noqdeen ilaha dakhli ee wadamada deriska ah ee shirarkan lagu qabto maadaama ay ku baxdo hanti aad u badani.
Hadaba shirka haatan ka socda duleedka magaalada Nairabi ayaa ah mid ay Soomaalidu aad uga dhur sugayaso natiijooyinka ka soo bixi doona, waxaana dad badani aaminsan yihiin inuu yahay fursaddii ugu dambeysay ee xalinta dhibaatada Soomaaliya oo beesha caalamku ku lug yeelato.
Shirkan oo soo maray marxalado kala geddisan kana soo gudbay dhibaatooyain badan ayaa waxaa hadda la soo gaaray wejigiisii ugu damabaeeyay ee awood qaybsiga oo la filayo inuu noqdo midka ugu adag maadaama uu yahay wejiga hay’adahii dawlaiga ah lagu soo dhisayo.
Waxaa muran iyo is qaqabsi badan oo mararka qaar sababi gaaray in shirka lagu kala tago ka taagnaa qodoba ay ka mid ahaayeen tirade baarlamaanka iyo cidda xaqa u leh soo xuliddooda.
Shirkan oo muddaddi uu socday ay ka muuqatay habacsanaan iyo jaha wareer dhaliyay in ergooyinka qaar ka mid ahi ay isaga dudaan ka dib markii ay u arkeen in shirka ay saamayn weyn ku leeyihiin kuwo ay siyaasadda ku coloobeen taasi oo dhalisay in waqti badan uu u xayirnaaddo shirku sidii kooxahaaasi dib loogu soo celin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkooda.
Caqabadaha kale ee shirkan la soo gudboonaaday ayaa waxaa ka mid ah khilaaafka iyo aragtida kala duwan ee wadamada safka hore ee shirka gacanta ku haya ka dhex aloosan, taasoo dhalisay inay kala jiitaan kooxaha Soomaaalida halkii laga rabay inay dhexdhexaadiyaan.
Shirkani ma ahayn marnaba mid gacanta Soomaalida ku jira, waxaana xaqiiqo ah in waxyaalo badan oo shirkan lagu go’aansaday ay ahaayeen kuwo Soomaalida dhusha lagaga keenay oo aan ku iman rabitaankooda.
Marxaladan awood qaybsiga ayaa iyana la filayaa inay muran ka dhex abuurto jilibyada hoose ee beel walba taasoo haddii aanay tanaasulaad isu samayn beeluhu shirka gelin doonta hakad dheer ama keeni kartaba inuu burburo.
Hadaba si kasta xaalku ha ahaadee waxaa jirta in shirkani laba arimood kaga duwanyahay kuwii ka horeeyay. Waa marka koowaade wuxuu qaatay muddo aad uga dheer wakhtigii la filayay in lagu soo gabagabeeyo taasoo haddii aanay bilaha soo socda wax ka soo bixin uu laba jirsan doono.
Laba sanno ma ahan wakhti yar. waxaanay inoo muujinaysaa in aanay ka qayb galayaasha shirku diyaar u ahayn wax heshiis oo aanay ahayn dad xukun wadaagi kara.
Dhanka kale siyaasi isku sheega mudada labada sanno ah madasha shirka fadhiyay ayaa dhankooda waxay sheegaan in muddadaas dheer ka marag kacayso ka go’naanta in la helo dawlad Soomaaliyeed oo shirkaas ka soo baxda maadaama ay u dhabar adaygeen ka qayb galka shirka mudada intaas le’eg inkastoo xaqiiqadu tahay in ninkastaa halkaas u joogo danihiisa gaarka iyo inuu wax ka noqdo maamul kasta oo meeshaas lagu soo dhoodhoobo.
Arinka labaad ee shirkani kaga duwanyahay kuwii ka horeeyay waa bah dilka iyo sida liidnimadu ka muuqato ee loola dhaqmo ergada shirka ka qayb galaysa.
Asal ahaanba ka qayb galayaasha shirka ayaa u badan rag uu damiirkoodu dhintay oo aan u qalmin inay ka qayb qaataan hogaanka ummadda,waana kuwo taariikhdu ay ku xusi doonto baal madaw. Nin mar dhawr bilood laga joogo booqasho ku tagay madasha shirka ayaa ii sheegay in ka qayb galayaasha shirka badankoodu aanay waxba dhaamin doofaarka ay xerada kula jiraan.
Waxaa madasha ku soo qamaamay dad aad u tiro badan oo jago doon ah kana mid ahayn kuw ay kenyanku u aqoonsanyihiin ergada rasmiga ah, waxaana adkaatay sidii lagu kala saari lahaa Soomaalida meesha isa soo dhoobtay.
Arintaas aan kor ku soo xusnay ayaa waxay keentay in marar badan ergada lagula kaco waxyaabo sharaf darro ah sida cuntada oo laga joojiyo ama kuwo Hoteelo daganaa in boorsooyinkooda bannaanka loo soo dhigo.
Waxaa intaas dheer in iyana rag magac sheeganaya ay saldhigyada booliska u hoydaan halka kuwa kelana la sheegay in uu asiibay cudurka halista ah ee AIDIS-ka mudadii ay Nairobi ku sugnaayeen.
Waxaa iyana jira kuw ergada ka mid ahaa oo intii uu shirku socday Kenya lagu dilay arintoodana aanay wax xal ah Kenyaanku weli ka keenin.
Waxaa ceeb iyo naxdin ah in maanta kuwa badan oo ergada ka mid ahi ay dacdarro iyo dhibaato ku haysato Nairobi oo quutul maalmeedkii saquuqal ka galay ka dib markii Kenyaanku ay ka xireen makhaayaddii ay ka cuntayn jireen..
Dawladda Kenaya oo iyadu gogosha u dhigtay Soomaalidan dawakhsan ayaad moodaa inay si badheedh ah bahdil ugu samaynayso Soomaalida wadankeeda ku shirsan marka aad fiirisid wayaabaha lagula kacayo ergada.
Mamnuuciddii Baasaaboorka Soomaalida ee Kenyaanku ku dhaqaaqay iyadoo xilligan ay Soomaalidu ku shirsanyihiin wadankeeda ayaa iyana ahayd arin kale oo waji gabax iyo foolxumo ku ah ka qayb galayaasha shirkan.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa Lax walba shilalkay is dhigto ayaa lagu gawracaa.
Soomaalidu maanta cid kale eersan mayso ee iyada ayaa meeshaas is dhigtay cadawgeediina miciin biday. Illeen marka uu qofku is sharfo ayaa dadka kalena sharfaan.
Hadaba ergadan ceebaysan oo cadawgu wheliyaa dawlad ay soo dhoodhoobaan ha sugin inay ummaddan dhib ka saarto, Soomaalina ilaa ay iyadu tashato oo ay danaheeda garato kana xorawdo dagaal ooge iyo mooryaan dadaal kasta oo dibadda uga yimaadaa waxba ku soo kordhin maayo.